BIL , LABA IYO SADEX BILOOD WAXBA MAAHA WAXAASE KA MUHIIMSAN INAYNU HELLNO DOORASHO CADAALAD AH | Toggaherer's Weblog
WARARKII WARGEYSKA OGAAL MAANTA OO KHAMIIS AH FEB.19, 2009.
“In la fool eryaa (Doorashada) ma fiicna, Deeqbixiyayaashu kaalin bay ku leeyihiin arrintan, waa ay garanayaan waqtigay wax ku qabsoomayaan iyo …” Gudoomiyaha Komishanka
“Bil, Laba iyo Sadex bilood waxba maaha waxase ka muhiimsan inaynu hello doorashadoo cadaalad ah” Madaxweyne ku xigeenka
Hargeysa (Ogaal) – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin iyo Gudoomiyaha Gudiga doorashooyinka Qaranka Jaamac ayaa si gaar gaar ah u muujiyay in aan hawsha diiwaan-gelinta laga gaadhsiin karreyn waqtiga kooban ee ka hadhay 29-ka March. Hase ahaatee, waxa ay tilmaameen in doorashadu ku dhacayso nidaam heshiis ay ku yihiin Axsaabta iyo dhinacyada ay khusayso doorashadu.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo shalay waraysi gaar ah siiyay TV-ga Horn Cable TV waxa uu sheegay in heshiis uga yaalo Xisbiyada mucaaradka ah iyo Xukuumada waxa laga yeelayo haddii hawsha diiwaan-gelintu guddo gasho 29-ka bisha soo socota. “Waxaad moodaa in dadka wax loo geliyay qaab qalad ah, doorashada waxa la yidhaahdaa waxa la kordhiyay laba jeer waa been.
Waxa jirtay muddo laga dhaxlay Mudane Cigaal. Shantayadii sanadood ee lana doortay waxa ku xigay sanadkii ay isla garteen Axsaabtu waxaanu ka shiraynay malaha laba bilood.” Sidaas ayuu hadalkiisa ku bilaabay Madaxweyne ku xigeenku, waxaana uu intaa raaciyay isaga oo hadalkiisa sii watana uu yidhi.
“Waxaanu ku heshiinay (Axsaabta) qodobo fara-badan.
1- waxa la yidhi diiwaan gelin hala galo si doorasho xor iyo xaqsoor ah loo helo, arrintaa waxa ku dheganaa labada Xisbi ee UDUB iyo UCID. Maadaama arrintaasi jirto, waxay dalbadeen Kulmiye in doorashada deegaanka si waqti loo hello dib loo dhigo, waanu ka yeelay oo waxa la soo horeysiiyay doorashada Madaxtooyada.
Qodabaanu kala saxeexanay oo la kala qortay, qodabadaa waxa ku jiray diiwaan gelinta la qabanayaa hadday gasho mudada caddidan ee 29 March ku eg, maxaa la yeelayaa, Diiwaangelinta la qabtay waa arrin culus oo Ilaahay inagu guuleeyay, waxay u baahantahay in laga sifeeyo dadka labada jeer is diiwaan geliyay ilayn xaqsoorbaa la doonayaaye.
Diiwaangelintii waxay u muuqataa inay gelayso 29-March oo ku dhawaaneyso marka imika mishiinka kala saaraya laga shaqeysiiyo ee uu muddo qaato inuu hoosta ka galo 29 March. Halkaa qodob ayaa nooga yaalay, waxaanu ahaa qodobkaasi in Komishanka iyo Axsaabtu dib isu arkaan oo dabeedna la cayimo waqti kale oo ay isla ogyihiin Komishanka iyo Axsaabtu, waliba waa shaqadii Komishanka oo ay farageliyeen Axsaabtu….Waxa la yidhi qodobkaa ugu danbeeya, hadii ay diiwaangelintu gasho 29 March in dib la isugu yimaado oo tusaale ahaan hadday dhaafto sadex bilood, haday dhaafto laba bilood iyo haday Bil dhaaftaba intaasuun in loo gudbiyo Guurtida oo Guurtiduna intaasuun ku ekaato.
Markaa ummadan waxa loo walaacinayo garan maayo annigu, waxay ahayd uun in wixii lagu heshiiyay uun dadka loo bandhigo arrinkuna halkaa ku dhamaado, annagu doorasho diyaar ayaanu u nahay.” Sidaas ayuu yidhi Madaxweyne ku xigeenku.
Su’aal laga weydiiyay inuu cadeeyo arragtidiisa ku wajahan in doorashadu ku qabsoomayso 29, march iyo in kale, wuu ka warwareegay waxaana uu tilmaamay hawlaha badan ee qabyada ah.
“Waxa loo galay diiwaan gelinta inay dalka ka dhacdo doorasho cadaalad ahi, maaha intaanu dubuq-nidhaahno in wixiina dalka ka fashilmaan. Umadiina isku kharibanto dabadeedna ay arrintu noqoto fawdo Bil, Laba iyo Sadex bilaad waxba maaha waxase ka muhiimsan inaynu hello doorashado cadaalad ah.” sidaas ayuu yidhi Madaxweyne ku xigeenku.
Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin waxa uu sheegay in aanay dhib lahayn muddo kooban oo lagu heshiiyay in arrimo farsamo ee dhiman lagu dhameystiro, Islamarkaana waxa uu u soo jeediyay Axsaabta inaan la buun buunin. “
Ka sokow mudane Madaxweyne ku xigeenka, Gudoomiyaha Gudiga doorashooyinka Qaranka Jaamac Swedan oo shalay laanta af Soomaaliga ee idaacada BBC-da u waramay ayaa in kasta oo aanu si rasmi ah u shaacin in ay xiliga loo cayimay dib uga dhici karto, hadana waxa uu sheegay in doorashada dedejinteeda laga wanaagsan-yahay.“Komishanka doorashooyinka Qaranku iyagaa hawshan u igman, hadday duruufo soo baxaana iyaga ayay tahay inay dadka la socodsiiyaan, waxaanu ka digaynaa oo aanu xisbiyada qaranka iyo hadalada maalmahan socda aanu dadka u sheegaynaa in ummadan doorashooyinkeedii qabsoomayaan inaanu jirin wer-wer badan oo arrintaa ku lug lihi jirin waa in lagu niyadsamaadaa” sidaas ayuu yidhi Gudoomiyuhu.
Waqtiga lagu heshiiyay in doorashadu dhacdo ee 29-ka bisha soo socota, wax badani kama hadhin, sidaa daraadeed waxa la weydiiyay Gudoomiyaha Gudiga doorashada lacagta ay u hayaan iyo sida ay arrintaa uga diyaar garoobeen. Waxaana uu ku dooday in deeq-bixiyayaasha Somaliland ka taageera Doorashooyinka aan wax ku xidhani jirin. “Lacagtu hab ayay martaa, habkiibay ku jirtaa waana lacag gacanta lagu hayo weeyaan.” Ayuu yidhi.
Waxa jira dhaliilo gudiga doorashooyinka loogu jeediyo caga-jiid iyo inaanay hawlaha gaar ahaan kala saarista dadka is diiwaangeliyay u kala waddin qaab deg-deg ah oo hufan oo ku haboon waqtiga lagu jiro ee la dhawrayo mudaynta doorashada, hase ahaatee, waxa uu ku dooday Gudoomiyuhu in mishiinka kala saarista dadka hawshiisu meel fiican marayso.
“Mishiinka kala shaandheynta, tii hore ee Faraha iyo wejiga kala saarayay waa la geliyay, ku guristii iyo hawlihii kale ayaa socda. Khamiista ugu danbeyn waxaanu rajaynaynaa inuu si fiican u hawl-galo oo aanu Axsaabta iyo Deeqbixiyayaasha ku casuuno si ay u ogaadaan bilowgiisa.” Sidaas ayuu yidhi.
Jaamac waxa la weydiiyay, dareenada isa soo taraya ee la xidhaadha waxa laga yeelayo haddii doorashadu xiligii loo cayimay ku dhici weydo maadaama arrintaas saan-saanteedii muuqatay, Islamarkaana uu durba walaaca arrintaa laga qabaa sii kordhayo, waxaana uu arrintaa kaga jawaabay. “Horta, waxa weeye in arrinta Fool-eriga laga daayo weeye. Wixii la fool eryaana ma fiicna, Deeqbixiyayaashu kaalin bay ku leeyihiin arrintan, waa ay garanayaan waqtigay wax ku qabsoomayaan iyo waqtiga aanay waxba ku qabsoomeyn, lacagta ay bixinayaana iskama bixinayaan ee nidaambay leedahay. Komishanka qarankuna si deg deg ah ayay ulla imanayaan qorshaha arrintan.”
Gudoomiyaha gudiga doorashada oo la sii weydiiyay in ay ku xidhan yihiin deeqbixiyayaasha ee aanay iyagu lahayn awood iyo go’aano waxa uu sheegay in haatan aanu heynin wer wer ay ka qabaan dhinaca dhaqaalahu, sidaa daraadeedna ay u madaxbanaan yihiin hawlahooda. Waxaana uu ku dooday in Axsaabta uu wadda tashi ka dhexeeyo, Islamarkaana ay arrimaha taagan deg-deg go’aamo midaysan uga gaadhi doonaan.